As of Sat, 30 May, 2020 11:45
रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटको अपेक्षा
हिजोआज नेपाललगायत विश्वका सबै राष्ट्र कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका छन् । नेपाल भने अनेकौं राजनीतिक खेल खेलिरहेको देखिएको छ । कोरोनासँग देश जुधिरहेको यस आ.व. २०७७-०७८ को संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहँदा नेपाल र नेपाली जनताले यस आ.व.को बजेट पाउने निश्चित प्रायः भएको छ ।
नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७६।१२।१९ गते कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवथापन मापदण्ड, २०७६ साथै कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने कार्ययोजना, २०७६ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा तत्कालै लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो मापदण्ड र कार्ययोजनाका आधारमा राहत वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । राहत प्याकेजमा ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, २ प्याकेट नुन, २ लिटर खाने तेल, ४ वटा साबुन, २ किलो चिनीको प्याकेज बनाएर वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राहत वितरणका लागि सम्बन्धित वडा समितिले राहत सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने भनिएको छ । साथै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत ग-यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणको आधार तय गर्ने सरकारको वित्तीय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालू वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सार संक्षेप, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुटाइने स्रोतको आधारलगायत कुनै पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा हुने विशेषता भने यसमा छैन ।
कोरोना भाइरस र मृतकको संख्या हजार नाघेका देशहरू
नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रामक महामारीले हालसम्म विश्का ४४ लाख ३१ हजार मानिस बिरामी भएका छन् भने २ लाख ९९ हजारभन्दा बढी मानिसले मृत्यवरण गरेका छन् । त्यस्तै ४५ हजार ९ सय चानुचन मानिस सिकिस्त बिरामी छन् भने १६ लाख ६२ हजार चानुचन मानिस निको भएर घर फर्केका छन् ।
लगानीकर्ताहरूका झिनामसिना कुराहरू
कोभिड–१९ बाट अर्थतन्त्रसँगै धितोपत्र बजार पनि प्रभावित हुन्छ नै । प्रभावको प्रकृति र गहिराइ सूचीकृत कम्पनीहरूमा बन्दाबन्दीको प्रभाव, त्यसपछिको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको मनोबलमा निर्भर हुनेछ । प्रकाशित वित्तीय विवरणहरूले कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा प्रभावसहितको धूमिल तस्बिर पस्केको छ, तर वास्तविकता अनिश्चित र अन्योलपूर्ण छ । राज्यको अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द र बन्दाबन्दीसँगै २०७६ चैत १० देखि बन्द सेयर बजार पचासौं दिन २०७७ वैशाख ३० गते खुलेर पुनः जेठ १
गत सातामात्र भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने २२ किलोमिटर सडक निर्माण ग-यो, यसको चौतर्फी विरोध नेपालमा भयो । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो । हाम्रा अग्रज वीर गोर्खालीहरूले जुन अस्तित्व राखेर गए, त्यसको हामीले सुरक्षा जगेर्ना गर्नैपर्छ । नत्र उनीहरूको हामीलाई सराप लाग्नेछ । सुगौली सन्धिदेखि नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो देश नेपालभित्रै पर्छ र नेपालकै हो । यसमा कसैको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन ।
कोरोना कहरले बढाएको शीतयुद्ध
विश्वमा बेलाबेलामा महामारी फैलन्छ, महामारीपछि त्यसमा राजनीतीकरण पनि हुने गर्छ, जसले आपसी सम्बन्धमा कटुतासम्म पनि ल्याउने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीं त महामारीका कारण ध्रुवीकरण र शीतयुद्ध पनि बढ्ने गरेको पाइन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा पनि कोरोना भाइरसका कारण चीन अमेरिकाबीच ठूलै वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ । कोरोना भाइरसको नामकरण, उत्पत्ति, फैलावट, सूचना सम्प्रेषणमा भएको लापरवाही आदि विषयमा अमेरिका र चीनका बीचमा शीतयुद्ध जारी नै छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ बाट मर्नेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसले विश्वका थुप्रै देशमा ठूलो असर पु-याएको छ ।
अबको बजेटमा युवालाई रोजगारी
आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकको संयुक्त रूप नै बजेट हो । एक आर्थिक वर्षमा राज्यलाई गतिशील बनाउने इन्धनका रूपमा यसलाई लिइन्छ । यसमा प्रत्येक वर्षको आम्दानी र खर्च तथा सरकारले जनताका लागि गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापको चित्रण गरिन्छ । यति बेला कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्र थला परेको छ । सरकारले आ.व. २०७७÷०७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटले संकटग्रस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई जीवन्तता प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
कोरोनाको कहरमा आगामी बजेट
कोेरोना र विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले ठूलो मानवीय क्षति गरिरहेको छ । अमेरिकाको जन्सहकिन्स विश्वविद्यालयले अनुमान गरेअनुसार यस भाइरसको संक्रमणले विश्व जनसंख्याको ४० देखि ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रभाव पार्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
कर्मकाण्डी नबनोस् अनलाइन शिक्षा
कोरोना संक्रमणको त्रासले अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि अन्योलता छाएको जगजाहेर नै छ । कोरोना लकडाउनका कारण विश्वका करोडौं बालबालिकाको पठनपाठन ठप्प भएको छ । लकडाउनले शिक्षाका क्षेत्रहरूमा पनि अनिश्चयको माहोल खडा गरिदिएको छ । शिक्षण संस्थाहरूमा पढाइ सुरु हुने दिनको टुंगो छैन । शिक्षण संस्थामा लामो बिदाका कारण विद्यार्थीहरू एक किसिमले बेरोजगार नै भएका छन् ।
आगामी बजेटमा कृषिक्षेत्रको अपेक्षा - १
कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमणबाट जोगिन संसारका अधिकांश देशमा गरिएको बन्दाबन्दीको कारण पूरै अर्थतन्त्र एक किसिमले ठप्प छ । कारोनाबाट पार पाउन अपनाइएको कदमबाट यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्न आपूर्ति र उत्पादनमा समेत पर्न गयो । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतकोे विश्व खाद्य कार्यक्रमले अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीलाई द्रुत गतिमा नियन्त्रण गर्न नसके विश्वभर भोकमरी फैलने खतरा रहेको जनाएको छ । भोकमरीको समस्याबाट मध्यम आय भएका मुलुकहरू झन् नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
लकडाउनपछिको सार्वजनिक यातायात
चीनको वुहानबाट चार महिनाअघि सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) को महामारीले एसिया, युरोप अमेरिकी महाद्वीप हुँदै संसारका सबैजसो देशहरूलाई अभूतपूर्व रूपमा आक्रान्त पारिसकेको छ । हालसम्म संसारका करिब ३५ लाख जनामा संक्रमण, २ लाख ५० हजार जनालाई मृत्युको मुखमा पु-याइसकेको यो भाइरसको संक्रमण कम गर्नका लागि मानिसको आवतजावत र भौतिक सम्पर्क न्यूनीकरण गर्न संसारका अधिकांश भूभाग अहिले लकडाउनमा छन् र इतिहासमै यति धेरै मानिस घरभित्र बन्द छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष प्याकेज आवस्यक : विनोद चौधरी
उद्योगपति एवं संघीय संसदका सदस्य विनोद चौधरीले कोरोनाभाइरसको प्रकोपका कारण शिथिल बनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै चौधरीले बन्दाबन्दीका कारण समस्यामा परेका अर्थतन्त्रका हरेक पक्षलाई चलायमान बनाइराख्न सरकारले तत्काल विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए । “हामीलाई थाहा छ– सरकारका पनि सीमा छन् ।